UmdlaloHub ilayibrari yokuqhuba imidlalo yakho kumaqonga ohlukeneyo | Ubunlog
UmdlaloHub ilayibrari yokuqhuba imidlalo yakho kumaqonga awahlukeneyo
Si bajonge usetyenziso olululo abanokulawula ngalo kunye nokwazisa imidlalo yabo kwindawo enye eli nqaku linokuba nomdla kuwe.
UmdlaloHub ilayibrari yomdlalo omanyeneyo ebavumela ukuba bajonge, bafake, basebenzise kwaye basuse imidlalo kwiLinux. Ixhasa imidlalo yemveli kunye non-native kwimithombo eyahlukeneyo, kubandakanya i-Steam, i-GOG, i-Humble Bundle kunye ne-Thoble Trove, njl. Imidlalo engeyiyo eyendalo iyahambelana newayini, iProton, iDOSBox, iScummVM, kunye neRetroArch.
naye ivumela ukongeza ii-emulators zesiko kunye nokukhuphela umxholo webhonasi kunye ne-DLC kwimidlalo yeGOG. Ukubeka ngokulula, i-Gamehub ujongano lweStam, GoG, Humblebundle, kunye neRetroarch.
UmdlaloHub ungasebenzisa ubuchwephesha bomphunga njengeProton ukuqhuba imidlalo yeWindows. UmdlaloHub yindawo yasimahla kunye nevulekileyo yemidlalo yeqonga ebhalwe kuyo Vala nge IGTK + 3.
Ukusuka kwicandelo lokumisela, sinako ukwenza, sikhubaze kwaye simisele iisetingi ezahlukeneyo ezinje:
Tshintsha phakathi kwemixholo.
Tshintshela kuluhlu lwecompact.
Yenza / khubaza ukudityaniswa kwemidlalo kwimithombo eyahlukeneyo.
Yenza / khubaza ukungqamana kokuhambelana.
Cwangcisa umkhombandlela wokuqokelela umdlalo.
Misela imikhombandlela yomdlalo ngamnye.
Yongeza / susa iiemulators.
1 Uyifaka njani i-GameHub kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
1.1 Uyifaka njani imidlalo nge GameHub?
Uyifaka njani i-GameHub kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukuba unomdla wokukwazi ukufaka esi sicelo kwinkqubo yakho, ungakwenza oko ngokulandela imiyalelo esabelana ngayo ngezantsi.
Ukufaka i-GameHub kufuneka songeze indawo yokugcina yale nkqubo kwinkqubo yethu, ke siza kuvula i-terminal nge-Ctrl + Alt + T kwaye kuyo siza kwenza le miyalelo ilandelayo.
Uyenzile ngoku Sihlaziya uluhlu lwethu lweephakeji nge:
Kwaye ekugqibeleni singasifaka esi sicelo kunye:
Enye indlela yokufaka esi sicelo kwinkqubo yethu ngoncedo lweephakeji ze-Snap, ke kuya kufuneka sinenkxaso yokufaka usetyenziso lolu hlobo kwinkqubo yethu.
Ukufaka Siza kwenza lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
Ukuba i-snap okanye ukongeza indawo yokugcina izinto yinto yakho Unokukhetha ukufaka esi sicelo ngoncedo lwephakeji yayo yakutshanje yeplatpak izinzile. Singakufumana oku ngokuhamba kule khonkco ilandelayo kwaye ujonge isitali sangoku.
Okwangoku uzinzileyo lwenguqulo 0.13.1-1 kwaye sinokuyikhuphela ngoncedo lwesiphelo sendlela ngokwenza lo mthetho ulandelayo:
Ngoku ndedwa Kuya kufuneka sifake iphakheji ekhutshelweyo ngomyalelo:
Umyalelo wofakelo ulandelayo:
Okokugqibela, indlela yokugqibela ekufuneka sisebenzise esi sicelo kwinkqubo yethu ngoncedo lweephakeji zeAppImage.
Ke ngendlela efanayo naleyo yangaphambili, Kule meko kuya kufuneka sikhuphele iphakheji ye-AppImage yamva nje kwikhonkco elingezantsi.
Okwangoku eyona phakheji ikhoyo ngoku ikhutshiwe kunye:
Emva kokukhuphela Siza kuyinika iimvume zokwenza kunye:
Kwaye sinokumilisela usetyenziso ngokuchofoza kabini kwifayili ekhutshelweyo okanye kwisiphelo sendlela ngokuyenza ngalo myalelo ulandelayo:
Kwaye ukulungele ngayo siya kufaka usetyenziso kwinkqubo yethu.
Uyifaka njani imidlalo nge GameHub?
Isicelo silula kakhulu ukusebenzisa, into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuyivula kwinkqubo yakho, oku kwenziwe Kwiskrini sokuqala, baya kucelwa ukuba bangene naziphi na iinkonzo ezixhaswa sisicelo.
Nje ukuba kwenziwe oku, kuya kubonakala njengodidi lwekhathalogu yonke imidlalo abanayo kwiiakhawunti zabo ukuze bakwazi ukuyifaka.
Ngoku Kuya kufuneka ucofe ekunene kumdlalo owukhethileyo kuluhlu kwaye ucofe iqhosha lokufaka.
Ukuba umdlalo awuyiyo eyomthonyama, i-GameHub iya kukhetha ngokuzenzekelayo umaleko wokuhambelana (umzekelo, iwayini) efanele ukwenziwa komdlalo kwaye ifake umdlalo okhethiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » UmdlaloHub ilayibrari yokuqhuba imidlalo yakho kumaqonga awahlukeneyo
I-Flowblade 2.0, isixhobo sokuhlaziya ividiyo
I-FreeOffice 6.2 ifika kwaye ezi zezona zinto zintsha zintsha